Exam School Application Checklist & ISEE Test Prep Guide | Boston School Finder
Exam School Application Checklist & ISEE Test Prep Guide
Hagahan waa dulmarka guud ee dugsiyada imtixaanadka ee ardayda iyo qoysaska hada kujira fasalada 6aad ama 8aad inta lagu jiro sanad dugsiyeedka 2019-2020.
Muhiim 2019 Cusboonaysiinta Dugsiga Imtixaanka: Waqtiga Kama Dambeysta Diiwaangelinta Imtixaanka Imtixaanka ISEE waa la KORDHIYAY
BPS waxay kordhisay diiwaangelintaoonleenka ah ee loogu talagalay ardayda BPS fasalka 6aad oo kaliya; waxaad kaqori kartaa ardaygaaga dhigta fasa 6aad ee BPS si oonleen ah halkaan ilaa laga gaaryo 5 PM, Jamcada, Oktoobar. 11.
Imtixaanka ISEE—imtixaanka BILAASHKA ah ee looga baahan yahay arjiga mid ka mid ah saddexda dugsi ee imtixaanka Boston—wuxuu dhici doonaa Khamiista, Noofambar 7 waxaana dugsiga looga qaadayaa dhammaan ardayda fasalka 6aad ee BPS.
Dhammaan ardayda kal uqalma—ee ahayn ardayda katirsan BPS ee fasalka 6aad iyo dhammaan ardayda BPS iyo kuwa aan katirsanayn BPS ee fasalada 8aad iyo 9aad—ayaa barta iskaga qori kara imtaxaanka ISEE maalinta Sabtida ah, Noofambar. 23 ayagoo imtaxaanka kugalaaya Boston Latin Academy, kaasoo bilaabmaaya 8 AM.
Waa kuwan liiska waxa ardayda iska qorta ISEE goobta ay tahay inay la yimaadaan.
Waxaad kaloo qoraal ugu diri kartaa erayga “EXAM” nambarka 33777 si aad markaba iskaga diiwaangeliso taleefankaaga.
Waa maxay Dugsiyada Imtixaanaadka?
Boston Public Schools (BPS) waxay leeyihiin saddex “dugsiyada imtixaanaadka ah” oo loogu talagalay ardayda ku jirta fasalada 7–12. Dugsiyada imtixaanaada Boston waa: Boston Latin School , Boston Latin Academy , iyo John D. O'Bryant School of Mathematics and Science. (Meelaha kale ee dalka kamid ah waxaa laga yaabaa inay ugu yeeraan dugsiyada noocan ah “ dugsiyada magnet.”) Gelitaanka dugsiyada imtixaanaadka waxaa lagu go'aamiyaa dhibcaha ardayga iyo waxqabadkooda imtixaanka caadiga ah.
Sideen U Doortaa Dugsi Imtixaan Ah Oo Aan Doonayo In Aan Ka Qaybgalo?
Dugsi kasta oo imtixaan wuxuu aqbalaa ardayda galaaya fasalka 7 iyo koox kale oo ardayda ah fasalka 9. Dugsiga O'Bryant wuxuu kaloo aqbalaa tiro yar oo arday ah oo galaaya fasalka 10. Waxaad ka baran kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan dugsiyada imtixaanaadka halkan BPS iyo adoo fiirinaya qaab dhismeedka kasta ee dugsi imtixaanaad halkaan adigo booqanayaa websaydkeena:
Gelitaanka dugsiyada imtixaanaadka waxay ku saleysantahay buundada gelitaanka ardayga oo ka kooban:
Celcelis Dhibcaha Fasalka (GPA)
Buundooyinka Imtixaanka ISEE
50 boqolkiiba dhibcaha gelitaanka ardayga waxaa go'aamiya GPA-da halka boqolkiiba 50 ee dhibcaha gelitaankooda lagu go'aamiyo dhibcaha imtixaanka laga qaadayo Imtixaanka Galitaanka Dugsiga Madax-bannaan (ISEE), oo ah imtixaan heer qaran ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad booqato dugsi kasta oo aad si dhab ah uga fikireyso inaad dhigato. Waxaad ka heli kartaa Liistiga Hubinta Booqashada ee halkan.
Yaa uqalma inuu codsado & Ka Qayb-galo Imtixaanaadka Dugsiyada?
Dhammaan waxyaabaha soo socdaa waa inay run ahaadaan:
Ardayda waa in hadda lagu diiwaangeliyaa 6aad, 8aad, ama 9aad fasalka saddexaad (O'Bryant kaliya) si ay codsadaan; iyo
Ardaydu waa inay ku nool yihiin Magaalada Boston. Cadeyn degenaansho ayaa looga baahan yahay ardayda hada dhigta Dugsiyada Dadweynaha Boston.
Waa maxay ISEE?
Imtaxaanka Galitaanka Dugsiyada ee Madax-Banaan (ISEE) waa imtaxaan qaran, oo caadi ah ayna sameeyaan urur loogu yeero Laanta Diiwaanada Waxbarashada (ERB). DPS waxay u adeegsadaan imtixaankan si ay u go'aamiyaan gelitaanka mid ka mid ah saddexda dugsi ee imtixaanka. ISEE waa imtixaan lacag la'aan u ah dhammaan ardayda uqalma ee ku nool Magaalada Boston. Ardayda xiiseynaya inay galaan mid ka mid ah dugsiyada imtixaanaadka Boston waa inay qaataan imtixaanka ISEE si ay u dalbadaan. U diyaargarowga imtixaanka si adag ayaa loo dhiirrigelinayaa.
Imtixaanka waxaa loo qabtay waqti waxaana kujira afar qaybood oo dookhyo kaladuwan ah oo lagu bixiyo farshaxanka Luuqada Ingiriisiga iyo Xisaabta. Waxaa jira afar nooc oo ah ISEE, oo ku saleysan kooxaha fasalada; Imtixaanka Heerka Dhexe waxaa loo isticmaalaa tartamayaasha dugsiyada imtixaanaadka galaya fasalka 7 halka Imtixaanka Heerka Sare loo isticmaalo tartamayaasha dugsiyada imtixaanaadka galaya ee fasalada 9 iyo 10.
Boston School Finder wuxuu kula talinayaa dhammaan ardayda xiiseyneysa ee kujira fasalada 6, 8, iyo 9 inay isdiiwaangeliyaan oo ay qaataan imtaxaanka ISEE si ay ukordhiyaan tirada xulashooyinka dugsiyada ee fasalada 7 ilaa 12.
Goorma ayey Ardeydu qaadanayaan ISEE?
Boston Public Schools waxay baddali doonaan sida ay u maamulaan ISEE xiliga dayrta 2019. Markii hore, ISEE waxaa lasamayn jiray kaliya dhammaadka usbuuca. Laga bilaabo sanad dugsiyeedka 2019-2020, ardayda hadda dhigata DPS fasalka 6aad waxay fursad u helayaan inay ISEE ku qaataan dugsiyadooda, inta lagu jiro maalin dugsi bisha Nofeembar. Dhammaan ardayda aan dhigan fasalka 6aad iyo dhammaan ardayda fasalada 8 iyo 9 waxay qaadan karaan ISEE maalin Sabti ah inta lagu jiro bisha Noofembar. Ardayda aan u fariisan karin imtixaanka maalinta Sabtida sabaabo diimeed awgood waxay qaadan karaan imtixaanka inta lagu guda jiro xili imtixaan gaar ah oo la samaynaayo maalin Axada ah inta lagu jiro bisha Noofembar. (Ka eeg liiskeena hubinta iyo jadwalka wixii laxariira taariikhaha saxda ah.)
Imtixaanka kadib, ardayda oo dhami waxay heli doonaan warbixinta natiijada imtixaanka ISEE ee shaqsiga ah oo boostada loogu soodiraayo cinwaanka gurigooda bisha Diseembar.
Ardaygaygu wuxuu heystaa IEP iyo/ama wuxuu ubaahanyahay Adeegyada ELL. Wali ma ufadhisan karaan ISEE?
Haa. Ardayda naafada ah iyo/ama aqoontooda Ingiriisiga xaddidan tahay waxay u qalmi karaan helitaanka caawimaado u oggolaanaya inay si buuxda uga qeybgalaan jawiga imtixaanka. Waalidku waa inay hore u codsadaan caawimaadahaan imtixaanaadka ayagoo raacaaya wakhtiga kama dambaysta ah ee diiwaangelinta ISEE iyadoo la adeegsanaayo Foomka Codsiga ee Caawiimaada hoyga Imtixaanka, oo laga heli karo websaydhka BPS ama buuxinaaya foomka diiwaangelinta waraaqda ah ee kujira liiska ISEE.
Wixii macluumaad dhammaystiran ah oo ku saabsan codsashada meelaynta imtixaanka ilmahaaga, fadlan booqo webseetka BPS.
Goorta & Sida la iska Diiwaangalinaayo ISEE
Waxaad iska diiwaangelin kartaa dhanka khadka si toos ah ee ISEE ama waxaad buuxin kartaa foomka diiwaangelinta waraaqda ah. Waxaad khadka tooska iskaga diiwaangelin kartaa barta www.bostonpublicschools.org/exam. Foomka diiwaangelinta waraaqda ah, oo ay la socdaan tilmamaha macluumaadka ee ISEE, ayaa laga heli karaa dugsiga ilmahaagu dhigto, dhammaan Maktabadaha Dadweynaha Boston, dhammaan Xarumaha Soo-dhaweynta BPS, waxaana laga heli halkaan oo aad kasoo degsaan karto kana daabacaan karto guriga.
Riix halkaan si aad isaga diiwaangelisid 2019 Imtixaanka ISEE. Waqtiga kama dambaysta ee la isku diiwaangelinayo waa Jimcaha, Sebteembar. 20, 2019.
Sidee Ardaygu Ugu Diyaargaroobayaa ISEE?
Waxaa jira habab badan oo loogu diyaar garoobo imtixaanka, oo ay ka mid yihiin:
Waxa laga Filayo ISEE Tilmaanta
Dadka sameeya ISEE, Laanta Diiwaanada Waxbarshada (ERB), waxay leeyihiin hage dhameystiran oo ka caawiya kuwa qaadaya imtixaanada inay si fiican u fahmaan qaabka guud ee imtixaanka, jihooyinka imtixaanka, noocyada adeegyada imtixaanka, iyo xaashida jawaabta. Hagahaan sidoo kale waxaa ku jira imtixaan tijaabo ah.
Waxa laga Filayo ISEE waxaa si lacag la'aan ah ugala soo bixi kartaa webseetka ERB. Nuqulada koobiga ah ayaa iib ku heli karaa qiimaha $20 markaad kasoo iibsanaysaa ERB. Nuqulada koobiga ah waxaa sidoo kale laga heli karaa degmo kasta oo ka mid ah afarta Xarumood ee Soo-dhaweynta waxaadna ka amaahan kartaa maktabadda agtaada ah. Waxa laga Filaayo ISEE sidoo kale waxaa laga heli karaa asagoo lacag la'aan ah webseetka adeegyada ee ERB.
Barnaamijka Diyaarinta Imtixaanaadka: Mashruuca Dugsiga Imtixaanka
Mashruuca Dugsiga Imtixaanaadka (ESI) wuxuu ku dadaalayaa inuu kordhiyo kala duwanaanta saddexda dugsi ee imtixaanka Boston. Barnaamijku wuxuu adeegsaneyaa macallimiinta Boston Public Schools ee shahaadada kahaysta ELA iyo macalimiinta Xisaabta si loo caawiyo ardayda inay isu diyaariyaan Imtixaanka Galitaanka Dugsiga ee Madax-bannaan (ISEE) oo laqabanaayo Noofembar. Barnaamijka sanadlaha ah ee lagu qabto Boston Latin School waxa uu socdaa labo asbuuc bisha Agoosto iyadoo koorsooyinka dib-u-cusboonaysiinta ee xiliga dayrta laqabto usbuucyada kahoreeya imtixaanka ISEE. Fadlan booqo Webseetka BPS si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ESI.
Steppingstone Academy waxay u diyaarisaa ardayda dhiirrigelinta leh, ee qoomiyadaha latakooro sidii looga aqbali lahaa iyo inay ku guuleystaan dugsiyada heerka sare ah ee madaxa bannaan, kuwa Kaatooligga, iyo dugsiyada imtixaanka qaada ee dawlada ee kuyaala aaga greater Boston. Si ay xaq ugu yeeshaan, codsadayaashu waa inay ahaadaan kuwo dagan Magaalada Boston oo hadda ay ku jiraan fasalka afaraad ama shanaad. Ka baro waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan sida loo dalbado barnaamijkaan diyaarinta lacag la'aan ah Webseetka Steppingstone Academy.
Xulashada diyaar garoowga Dheeraadka ah ee ISEE
Ayadoo kuxiran dugsiga uu ilmahaagu dhigto, dugsigaaga wuxuu bixin karaa casharo diyaarin ah oo ISEE ah. Waxa kale oo jira dookhyada dugsiyo badan oo gaar loo leeyahay, oo lacag ah, laakiin la soco in koorsooyinkaan diyaarinta imtixaanka ee gaarka loo leeyahay ay qaali noqon karaan. Waxaad ka heli kartaa adeegyada diyaarinta imtixaanka ISEE ee khaaska ah adigoo karaadinaaya Google “imtixaanka tijaabada ISEE ee Boston”